रियल लव स्टाेरीमाआधारित "नभेटी लाएको माया" (उपन्यास) आजदेखी • Nepal's Trusted Digital Newspaperरियल लव स्टाेरीमाआधारित "नभेटी लाएको माया" (उपन्यास) आजदेखी • Nepal's Trusted Digital Newspaper
रियल लव स्टाेरीमाआधारित “नभेटी लाएको माया” (उपन्यास) आजदेखी
शनिबार, फाल्गुन १४, २०७८
रातिको ९ बजेको थियो, असारको महिना कामबाट आइसकेपछि खाना खाएर सुत्न कोठाभित्र पसेको थिए , बाहिर झमझम पानी परिरहेको थियो। त्यही माथी टिनको छानो, आकाशबाट बर्सिएका ती पानीका छिटाहरुको आवाजले झ्याप्प निद्रा लाग्न सकिरहेको थिएन । फेरि झ्याल पनि खुल्लै रहेछ , चिसो हावाले आङ नै श्रीङ्ग बनायो । त्यो दिन मौसम चिसो भएर पनि होला , तातो चिया खान मन लाग्यो । अनि आमालाइ एक कप मिठो चिया पकाउन आग्रह गरे ।
आमाले फेरि “यो राती कस्तो चिया खान मन लाएको होर ? धेरै चिया खाइ खाइ ज्यान सुकाएर त्यो हाल बनाएको छ , पर्दैन सुत खुरुक्क” भन्दै हुनुहुन्थ्यो। फेरि जति नै कराएपनि आमाको मन न हो, छोराको माया कसो नलाग्थ्यो र , केहि बेरमा मिठो चिया बनाएर टेबुलमाथी राख्दिनुभयो। अनि मैले एउटा हातमा चिया , र अर्को हातमा मोबाइल हेरेर बस्दै थिए , यसो फेसबुक हेर्न मात्र के थालेको थिए झ्याप्प अगाडि कसैको तस्बिर देख्न पुगे , जुन तस्बिर माकुराको जालो टाँसिएझै मेरो आखामा टाँसिन थाल्यो। अनि त्यो तस्बिर हेरेर टोलाउदै थिए, यता चिया त सेलाइसकेछ। फेरि बत्ती पनि झ्याप्पै गयो , मोबाइलमा डाटा , पैसा सबै त्यही बेला सकिनु परेको। उस्को प्रोफाइल हेर्नका लागी म निकै आत्तुर थिए , बत्ती आउछ कि भनेर एकछिन कुरे बसेको थिए , कुर्दाकुर्दै मोबाइल हातमै राखेर यत्तिकै निदाएछु।
अरु दिन अबेलासम्म सुत्ने मान्छे म , त्यो दिन सबेरै बिउझिन पुगे । समय कति भएछ भनेर यसो मोबाइल हातमा लिनासाथ, राती हेर्दाहेर्दै निदाएको मुहार झ्याप्प अगाडि देखियो । फेरि यो चनचले उमेर न हो , मनमा अनेकौ कुराहरु खेल्न थालिहाले । एकछिन तस्बिरलाई निकै घोरिएर हेर्दै थिए, फेरि यि लोभी नजर पनि उस्तै तस्बिरलाइ कतिबेला सुटुक्कै दिलभित्र पुर्याए पत्तै भएन, चुलबुले मन एकछिनमा त बोलम बोलम बनाइहाल्यो, सुरुमा के बोल्ने, कसरी बोल्ने , बोले पनि रिप्लाइ आउने होकी नाइ , अलमल्ल परिरहेको थिए । त्यै पनि बोल्ने बाहाना बनाएर फेसबुक मा हाइ भन्दै म्यासेज पठाए । तर सोच्दै नसोचेको कुरा एक्कासी उताबाट “हजुर” भन्दै रिप्लाइ आयो । त्यस्पछी त खुसिले नौडाडै काटेको थियो। मीठो शब्दमा हजुर भन्दै रिप्लाइ पाएपछी मन नै फुरुङ्ग भएर आयो।
मन यति फुरुङ्ग थियो कि, सम्बोधन पनि के भनेर गरौ ? एकछिन त अक्क न बक्क भए । अनि हजुर भनेर साइनो लगाउदै केहिबेरमा अर्को म्यासेज पठाए। “खानाखानु भयो ? के गर्दै हुनुहुन्छ ?” “हजुर खाएर यतिकै बस्दै, अनि हजुरले खानुभयो ?” रिप्लाइ आयो । हजुर मैले पनि खाए । एक्छिन यसरी नै च्याटिङ्ग चल्दै गर्दा उस्को बोल्ने शैली अनि बोलिमा भरिएको त्यो मिठासपन, असाध्यै मन पर्न थाल्यो। त्यहीमाथी चट्ट कालो कुर्था अनि सेतो सलमा सजिएको त्यो त्यो प्रोफाइलको फोटो, यति पाएपछि यो लोभी मन कहा मन मान्थ्यो र , बिहे गर्ने उमेर पनि बिस्तारै नजिकिदै थियो । फेरि आफुले खोजेको जस्तै मायालाइ भेटेको मसहुस पनि भयो । खै त्यतिबेला के सुर चल्यो चल्यो , धेरैबेर पनि हैन एकछिन मात्र बोलेका थियौ , केटाको मन न हो पग्लिहाल्यो , दायाँ बायाँ केहि नसोची बेहोसीपनमै उस्लाइ “प्रेम प्रस्ताब” राखे। बाकी हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस।